Kids Mode 10.0.41 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 10.0.41 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ပညာေရး Kids Mode
Kids Mode ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
- Animated အိမ်မှာစိတ်ကြိုက်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူ screen နဲ့တစ်ဦးကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူ interface ကို
- ပျော်စရာကင်မရာ, အသံတျောကို changer များနှင့်အဖြစ်လည်းစာအုပ်အပါအဝင်သင်တို့၏သားသမီးများအတွက်သီးသန့် applications များ
- ရည်ရွယ်တဲ့ In-app ကိုဝယ်ယူမှကို Safe နှင့်အမြဲတမ်းမိဘ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ
ပညာရေးဆိုင်ရာ app များ, ပျော်ရွှင်စရာဒစ်ဂျစ်တယ်ကစားစရာ, သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတီဗီဇာတ်ကောင် featuring ဂိမ်းများနှင့်အံ့သြဖွယ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်စာအုပ်များအပါအဝင်အထူးကလေးတွေက Store က, (ဘယ်မှာမိဘများမှာ download ခွင့်), အတွက်အသက်အရွယ်နှင့်ရရှိနိုင်အမျိုးအစားအားဖြင့်ခွဲထားခဲ့သည်အမျိုးမျိုးသော applications များ
[App ကို Access ကိုအခွင့်ထူးနှင့်စပ်လျဉ်း]
ကလေးတွေက Mode ကိုနှင့်၎င်း၏အခြေခံပညာလေးတွေ apps များအတွက်အရည်အသွေးပြည့်ဝန်ဆောင်မှုပေး, က app ကိုအသုံးပြုခွင့်အခွင့်ထူးကိုအောက်တွင်လိုအပ်သည်။ (မသင်မနေရ Access ကိုအခွင့်ထူး)
- သိုလှောင်မှု: (ကလေးတွေက Mode ကို) မိဘထိန်းချုပ်ခွင့်ရနိုငျသောမီဒီယာဖိုင် (ဓါတ်ပုံ / ဗွီဒီယို / ဂီတ), သတ်မှတ်လိုက်ပါ။
အပလီကေးရှင်းကိုဖန်တီးထားတဲ့ကိရိယာအပေါ်မီဒီယာဖိုင် (ဓါတ်ပုံ / ဗွီဒီယို / ပုံဆွဲ) ကိုကယ်တင်နိုင်ရန် (ကလေးတွေကကင်မရာ, ကလေးတွေက Drawing) ။
(ကလေးတွေကဗီဒီယို, ကလေးတွေက, Music, ကလေးတွေကပြခန်း) မီဒီယာဖိုင်တွေဖတ်ရန် (ဗီဒီယို / ဂီတ / ဓာတ်ပုံ) device မှ။
- ဖုန်း: (ကလေးတွေက Mode ကို) ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကလေးတွေ Mode ကိုသုံးတဲ့အခါခေါ်ဆိုမှု status ကိုစစ်ဆေးရန်။
ကင်မရာ, ဂီတပြဇာတ်, ဖုန်းခေါ်နေစဉ် function ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန် (ကလေးတွေကကင်မရာ, ကလေးတွေက, Music, ကလေးတွေကမှော်အသံ) ။
- ကင်မရာ: (ကလေးတွေကကင်မရာ) ကင်မရာကိုကိုအသုံးဖို့, app ထဲမှာဗီဒီယို function ကို။
(ကလေးတွေအိမ်) 3D ခုန်ကစားပွဲထဲမှာကင်မရာက function ကိုသုံးဖို့အတွက်။
- ဆက်သွယ်ရန်: (ကလေးတွေက Mode ကို) မိဘထိန်းချုပ်ခွင့်ရနိုငျသောအဆက်အသွယ်များ, ထည့်ရန်။
- မိုက်ကရိုဖုန်း: (ကလေးတွေကကင်မရာ, ကလေးတွေကမှော်အသံ) ဗီဒီယိုကိုအသုံးဖို့, apps များအတွက် function ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
- SMS ကို: (ကလေးတွေကကင်မရာ) ကလေးတွေကကင်မရာကိုသုံးနေစဉ်သတင်းစကားစစ်ဆေးစေရန်။
Kids Mode အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Kids Mode အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Kids Mode အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Kids Mode အား အခ်က္ျပပါ
graciekewl စတိုး 791 149.14k
Kids Mode ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Kids Mode အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 10.0.41
ထုတ်လုပ်သူ Samsung Electronics Co.,Ltd. Kids Mode
Kids Mode APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ